Na eo aza ny vaksinin'ny COVID any India izay mitady toeran-kaleha soa aman-tsara any an-toerana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Na eo aza ny vaksinin'ny COVID any India izay mitady toeran-kaleha soa aman-tsara any an-toerana
Aprily 13, 2021
Vaksinin'ny COVID India
Ny fanadihadiana an-tserasera iray notontosain'i Noor Mahal dia nilentika lalina tamin'ny làlan'ny fitsangatsanganana sy fandraisana olona tao India tato ho ato.
Na dia eo aza ny fandefasana vaksinin'ny COVID-19 any India, ny ankamaroan'ny olona dia mifantoka amin'ny dia an-trano.
Ny fialantsasatra fohy azo entina amina fiara dia fironana iray izay toa tonga eto hijanona mandritra ny fotoana fohy.
Ny ankamaroan'ny olona dia nifidy ny fari-pahaizana momba ny fahasalamana sy fiarovana avo lenta, ny faharetana, ny fizahan-tany tompon'andraikitra, ary ny sandan'ny vola ary tena ilaina ny vola.
Ny valin'ny fanadihadiana dia nanasongadina fa na eo aza ny fiasan'ny vaksinin'ny COVID any India ary eo am-panaovana vaksiny ny olona, ​​ny 89% amin'ireo mponina ao India dia mazoto mitsidika ireo toerana any an-toerana izay manaraka ny protokolon'ny fiarovana sy fidiovana COVID. Ny ankamaroan'ny valinteny dia nanantitrantitra ny fanarahana ny fenitra ara-pahasalamana sy fiarovana avo lenta any amin'ireo toerana fizahan-tany, hotely sy hotely alohan'ny hisafidianana ny toerana fivezivezena tiany sy ny tany onenan'izy ireo.
Notarihin'i Noor Mahal, ny fanadihadiana dia nanatri-maso ihany koa ny fitsangatsanganana ho an'ny tokantrano noho ny toerana any ivelany. Ny fanadihadiana an-tserasera dia natao tamin'ny santionan'ny olon-dehibe nandeha nitady asa na fialam-boly tao anatin'ny 6 volana lasa ary tsy maintsy mikasa ny hanao dia amin'ny 2021. Araka ny fanadihadiana vaovao momba ny mpandeha eran-tany Informed, izay nanangona olon-dehibe maherin'ny 3,000, olona iray amin'ny olona 3 Manantena indrindra ny hanao dia lavitra miaraka amin'ny ankohonany sy ny namany raha oharina amin'ny dia irery. Ny famaritana ireo singa manapa-kevitra ao aorian'ny fisafidianana izay toerana halehan'ny hotely tiany dia nifidy ny fenitra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana avo lenta, ny faharetana, ny fizahan-tany tompon'andraikitra ary ny sandan'ny vola azo antoka ho valiny.